Kyaw Win Tun's Page - Myanmar Network
Kyaw Win Tun's Likes
Kyaw Win Tun's Friends
Kyaw Win Tun's Discussions
အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ လေ့လာစရာ သိစရာလား
Started this discussion. Last reply by AshinDamahar Nanda Jun 15, 2015. 33 Replies 45 Likes
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလျင် သဒ္ဒါကိုလေ့လာဖို့ လိုသလား။လိုပါသည်။ဘာကြောင့်လဲ။သဒ္ဒါသိမှသာ မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်သုံးတတ်မှာပါ။ပြန်သုံးဖို့ မရည်ရွယ်ရင်ရော။မရည်ရွယ်ရင်လည်း သဒ္ဒါကိုလေ့လာသင့်ပါသည်။ ပြန်သုံသည်ဆိုရာမှာ…Continue
အင်္ဂလိပ်စာ အရေးတွင်သတိထားသင့်သည့် အချက်များ
Started this discussion. Last reply by brangnu Aug 16, 2012. 16 Replies 37 Likes
စာပိုဒ်ကောင်းကောင်း တစ်ပိုဒ်ရရန် ကူညီပေးသော စကားလုံးများအကြောင်း နှင့် စာအရေးအသားတွင် သတိထား သင့်သည့် အချက်များကို ဤဆောင်းပါးတွင်ပြောပါမည်။စကားပြောနှင့် အရေးစာတမ်း ဆောင်းပါး စသည့်တို့ ကိုရေးရာတွင်…Continue
Started this discussion. Last reply by Hein Latt Sep 17, 2013. 26 Replies 35 Likes
၀ါကျအဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသား ဆောင်းပါးတွင် “မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မဆို အရေးကို တသီးတသန့်လေ့ကျင့်မှသာလျင် ကျွမ်းကျင်၏။” ဆိုသော စာကြောင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဆီလျော်စေရန် “One cannot have good…Continue
အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသား (၀ါကျ အဆင့်)
Started this discussion. Last reply by Thike Htun Jun 8, 2012.7Replies 29 Likes
မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မဆို အရေးကို တသီးတသန့်လေ့ကျင့်မှသာလျင် ကျွမ်းကျင်၏။ ယနေ့အင်တာ နက်ခေတ် တွင်မူ အီးမေးလ်အသုံးပြုသူတိုင်း ရေးဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် ပေး စာမှအပ အခြား…Continue
Kyaw Win Tun has not received any gifts yet
Kyaw Win Tun's Page
At 12:16 on January 30, 2012, Nyein Shwe Sinn Myint said…
Saya. Thanks for explain. Nyein